Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » US VP Kamala Harris na NASA na ọrụ ihu igwe ngwa ngwa
Ngwa ngwa nke sayensị ụwa na ọmụmụ ihu igwe mere ihe ngosi taa, Fraịde ka osote onye isi ala Kamala Harris gara NASA's Goddard Space Flight Center na Greenbelt, Maryland. Osote onye isi ala nwetara nleba anya n'onwe ya ka mmemme mbara igwe nke mba ahụ si enyocha mgbanwe ihu igwe ma na-enye ozi dị mkpa iji ghọta mgbanwe ụwa anyị na mmetụta ha na ndụ anyị.
N'oge nleta ahụ, onye nchịkwa NASA Bill Nelson kpughere ihe oyiyi mbụ sitere na Landsat 9, ọrụ nkwonkwo nke NASA na US Geological Survey (USGS) malitere na njedebe September. Ihe onyonyo a gosipụtara Detroit na Ọdọ Mmiri St. Clair gbara agbata obi, oke osimiri Florida na-agbanwe agbanwe, yana mpaghara Navajo Country na Arizona. Ha ga-agbakwunye na akụ na ụba nke data na-enyere anyị aka nyochaa ahụike ihe ọkụkụ na mmiri ejiri maka ịgba mmiri, jikwaa akụrụngwa sitere n'okike dị mkpa, na nyochaa mmetụta mgbanwe ihu igwe.
Ihe oyiyi ọhụrụ ahụ, ihe niile enwetara Oct. 31, na-enyekwa data gbasara mgbanwe mgbanwe ihu igwe nke Himalayas na Australia, na-agbakwụnye na Landsat na-enweghị ihe ndekọ data nke na-agafe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 50 nke mbara ala nke dabeere na mbara ala.
“Ekwenyere m n'ezie ọrụ oghere bụ omume ihu igwe. Ọrụ oghere bụ agụmakwụkwọ. Ọrụ oghere bụkwa uto akụ na ụba. Ọ bụkwa ihe ọhụrụ na mkpali. Ọ bụkwa maka nchekwa anyị na ike anyị,” osote onye isi ala kwuru. “Mgbe a bịara n'ọrụ oghere anyị, enwere ike enweghị oke. … Ya mere, ka anyị si ebe a pụọ, ka anyị gaa n’ihu na-eji ohere nke ohere.”
Harris na Nelson tụlekwara ọkwa NASA maka ọrụ ọhụrụ Earth Venture Mission-3 (EVM-3). Nnyocha nke Convective Updrafts (INCUS) ga-amụ ka oke mmiri ozuzo na égbè eluigwe si eto ma na-esiwanye ike, nke ga-enyere aka melite ihu igwe na ụdị ihu igwe.
"Ndị ọkachamara NASA anyị taa mere ka anyị leba anya n'ọtụtụ ụzọ anyị kwesịrị isi ghọta ụwa anyị nke ọma, site na ụkọ mmiri ozuzo na okpomọkụ obodo, ruo n'oké osimiri anyị na ọtụtụ ọdịdị ala anyị nwere ike ịhụ na-agbanwe site na eluigwe," Nelson kwuru. "Ndị nchịkwa Biden-Harris kpebisiri ike inwe ezigbo ọganihu na nsogbu ihu igwe iji rite uru n'ọgbọ na-abịa, na NASA bụ isi ọrụ ahụ."
NASA, yana National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) na USGS, so na ụlọ ọrụ gọọmentị etiti na-eme nyocha ihu igwe ma na-enye data ihu igwe dị oke mkpa maka ụlọ ọrụ na òtù dị iche iche n'ụwa nile. Oke ihu igwe na ihe omume ihu igwe - gụnyere ụkọ mmiri ozuzo, idei mmiri, na ọkụ ọhịa - na-aghọ ihe na-eme mgbe niile. Nghọta sitere na mbara igwe na-enyere anyị aka ịmụ mbara ala anyị dị ka usoro jikọtara ọnụ iji ghọta ihe ndị a na-abara ndị mmadụ uru n'ebe ha bi.
Osote onye isi ala zutere ndị ọkà mmụta sayensị na ndị injinia iji kparịta ka nnukwu Pọtụfoliyo NASA nke ọrụ sayensị ụwa si enyere aka dozie nsogbu ihu igwe na-eche ụwa anyị ihu.
Ihe omume Sayensị ụwa dị iche iche nke NASA gụnyere satịlaịtị arụnyere na mmekorita ya na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ndị ahụ gụnyere NOAA na USGS, nke nwekwara ndị nnọchiteanya nọ n'aka iji zute Harris.
"Ugbu a n'ime afọ iri nke isii ya, mmekorita NOAA-NASA na-etinye nkà na ụzụ kacha mma n'ụwa na mbara igwe iji meziwanye ikike mba ahụ iji nyochaa na ịkọ ihu igwe na ihu igwe ụwa," ka onye nchịkwa NOAA Rick Spinrad, Ph.D. "Ndị otu ndị ọkachamara NOAA na NASA nọ na NASA Goddard na-aga n'ihu na mba anyị na-esote ọgbọ satịlaịtị geostationary, nke a na-akpọ GOES-R, nke na-emepụta data dị mkpa maka amụma ziri ezi na nke oge na-azọpụta ndụ ma na-enyere ndị mmadụ aka ime mgbanwe maka mgbanwe ihu igwe."
Tanya Trujillo kwuru, "Ihe onyonyo na-adọrọ adọrọ nke Landsat 9 na data sayensị dị n'okpuru ga-enyere ime ime obodo aka ijikwa ala na akụrụngwa nke mba anyị nke ọma, chekwaa ihe nketa ọdịnala anyị, sọpụrụ ibu ọrụ ntụkwasị obi anyị na ụmụ amaala America na ụmụ amaala, na ilebara nsogbu ihu igwe anya," Tanya Trujillo kwuru. nke onye ode akwụkwọ enyemaka nke ime ụlọ maka mmiri na sayensị. "Kwa ụbọchị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 50 data Landsat nke USGS jikwaa ma na-ekerịta n'efu na-enye nghọta ọhụrụ na nkwado mkpebi maka ndị ọrụ gọọmentị, ndị nkuzi, na azụmahịa iji ghọta nke ọma na jikwaa ọdịdị ala anyị na-agbanwe."
N'oge nleta ya, Harris rụrụ ogwe aka rọbọt na-anwale maka ọrụ ịgbanye mmanụ n'ime orbit nke satịlaịtị Landsat 7 n'ọdịnihu. Satịlaịtị ahụ na-amụ ụwa ugbu a dịka akụkụ nke ụgbọ mmiri Landsat.
Harris gara njem Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem (PACE), nke gụnyere ngwa a na-arụ ugbu a na Goddard maka mmalite 2022. PACE ga-akwalite ikike nleba anya maka ahụike oke osimiri site na ịlele nkesa phytoplankton - obere osisi na algae na-akwado webụ nri mmiri. Ihe omume GOES-R, nke GOES-T satịlaịtị akwadoro ịmalite maka NOAA na Febụwarị 2022 iji kwalite amụma ihu igwe, gosikwara.